Leviticus 27 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nea wɔde ahyɛ bɔ a wɔsan tɔ (1-27)
Afi (14, 15)
Abakan (26, 27)
Nneɛma a woyi si hɔ ma Yehowa korakora (28, 29)
Edu mu nkyem baako a wɔsan tɔ (30-34)
27 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Sɛ obi hyɛ bɔ titiriw bi+ sɛ obetua obi* ti ade ama Yehowa sɛnea ɛbo a wɔatwa ato hɔ no te a, 3 ɔbarima a wadi mfe 20 kosi 60 bo bɛyɛ nnwetɛbona* 50, sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no.* 4 Na sɛ ɔyɛ ɔbea a, ɛbo no bɛyɛ nnwetɛbona 30. 5 Sɛ ɔyɛ ɔbarima a wadi mfe 5 kosi 20 a, ɛbo no bɛyɛ nnwetɛbona 20, na ɔyɛ ɔbea nso a, nnwetɛbona 10. 6 Sɛ ɔyɛ ɔbarima a wadi bosome baako kosi mfe anum a, ɛbo no bɛyɛ nnwetɛbona anum, na ɔyɛ ɔbea nso a, nnwetɛbona abiɛsa. 7 “‘Sɛ wadi mfe 60 ne akyi na ɔyɛ ɔbarima a, ɛbo no bɛyɛ nnwetɛbona 15, na ɔbea nso nnwetɛbona 10. 8 Nanso sɛ ahia nea wahyɛ bɔ no na ne nsa nso bo a wɔatwa ato hɔ no so a,+ ɔmfa onipa no mmegyina ɔsɔfo no anim na ɔsɔfo no nkyerɛ ne bo. Ɛbo a nea wahyɛ bɔ no benya na ɔsɔfo no betwa ama no.+ 9 “‘Sɛ ɔde aboa a wotumi de bɔ afɔre ma Yehowa na ahyɛ bɔ a, nea ɔde bɛma Yehowa biara bɛyɛ ade kronkron. 10 Ɔrentumi nsesa mfa nea eye nsi nea enye anan, na ɔrentumi mfa nea enye nsi nea eye anan. Na sɛ ɛba sɛ ɔde aboa foforo sesa nea ɔde ahyɛ bɔ no a, ɛnde mmoa abien no nyinaa bɛyɛ ade kronkron. 11 Nanso sɛ ɛyɛ aboa a ne ho ntew+ a wontumi mfa mmɔ afɔre mma Yehowa a, ɛnde ma ɔmfa aboa no mmegyina ɔsɔfo no anim. 12 Afei ɔsɔfo no nhwɛ sɛnea aboa no te, sɛ eye oo, sɛ enye oo, na ɔnkyerɛ ne bo. Nea ɔsɔfo no bɛka na ɛbɛyɛ ne bo. 13 Ɛba sɛ nea ɔhyɛɛ bɔ no pɛ sɛ ɔsan tɔ n’ade bio a, wɔbɛkyɛ ne bo no mu anum ama watua emu baako aka ne bo no ankasa ho.+ 14 “‘Sɛ obi hyira ne fi so ma Yehowa sɛ ade kronkron a, ɔsɔfo no nhwɛ sɛnea ofi no te, sɛ eye oo, sɛ enye oo, na ɔnkyerɛ ne bo. Nea ɔsɔfo no bɛka na ɛbɛyɛ ne bo.+ 15 Nanso sɛ nea wahyira ne fi so no pɛ sɛ ɔsan tɔ bio a, wɔbɛkyɛ ne bo no mu anum ama watua emu baako aka ne bo no ankasa ho. Afei ɛbɛsan abedi ne nsam. 16 “‘Sɛ obi twa n’asaase fã bi hyira so ma Yehowa a, aba dodow a wobetumi adua wɔ so na ɛbɛkyerɛ ne bo: Sɛ ɛyɛ baali* a, homar susude* baako biara bɛyɛ nnwetɛbona 50. 17 Sɛ Ahofadi Afe+ no mu ara na ohyiraa n’asaase no so a, ɛbo a wɔatwa ato so no ara na obetua. 18 Sɛ Ahofadi Afe no akyi na ohyiraa n’asaase no so a, ɔsɔfo no nhwɛ mfe a aka ansa na Ahofadi Afe asan adu na ɔmfa nsese ne bo. Ɔbɛhwɛ mfe a aka no na watew ne bo so.+ 19 Na sɛ nea ohyiraa asaase no so no pɛ sɛ ɔsan tɔ a, ɛnde wɔnkyɛ ne bo no mu anum na ontua mu baako nka ne bo no ankasa ho. Afei ɛbɛsan abedi ne nsam. 20 Nanso sɛ wansan antɔ asaase no na wɔtɔn ma obi foforo a, ɔrentumi nsan ntɔ bio. 21 Edu Ahofadi Afe no a, asaase no bɛyɛ ade kronkron a wɔahyira so ama Yehowa. Ɛbɛyɛ asɔfo no agyapade.+ 22 “‘Sɛ obi hyira asaase bi so ma Yehowa na ɛnyɛ n’ankasa agyapade, na mmom ɔtɔe a,+ 23 ɛnde ɔsɔfo no nsese mfi saa bere no nkosi Ahofadi Afe no so na ɔnkyerɛ ne bo mma ontua no saa da no ara.+ Ɛyɛ ade kronkron ma Yehowa. 24 Ahofadi Afe no du a, asaase no bɛsan akodi nea ɔtɔ fii ne hɔ no nsam; ɛbɛkɔ nea ɛyɛ n’agyapade no hɔ.+ 25 “‘Ɛsɛ sɛ wɔsese biribiara bo sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no. Dwetɛbona biara yɛ gerah* 20. 26 “‘Aboa biara abakan de, ɛnsɛ sɛ obiara hyira so, efisɛ wɔwoo no sɛ abakan maa Yehowa.+ Enti nantwi oo, oguan oo, ɛyɛ Yehowa dea dedaw.+ 27 Na aboa a ne ho ntew abakan de, sɛ ne wura no pɛ sɛ ɔsan tɔ a, ontua ɛbo a wɔatwa ato hɔ no, na ɔmfa ɛbo no nkyem anum mu baako nka ho.+ Na sɛ wantɔ a, ɛnde wɔntɔn no sɛnea ne bo te. 28 “‘Nanso sɛ obi yi n’agyapade bi si hɔ sɛ ɔde ama* Yehowa korakora a, ɛyɛ onipa oo, aboa oo, n’asaase oo, obiara rentumi ntɔn, na ɔrentumi nnye bio nso. Biribiara a wɔayi asi hɔ no yɛ ade kronkron paa ma Yehowa.+ 29 Afei nso, sɛ woyi obi si nkyɛn* sɛ wonkum no a, obiara rentumi ntua ne ti ade nnye no.+ Ɛsɛ sɛ wokum no ɔkwan biara so.+ 30 “‘Asaase so nnɔbae ne dua so aba nyinaa mu ntotoso du du*+ yɛ Yehowa dea. Ɛyɛ nneɛma kronkron ma Yehowa. 31 Sɛ obi pɛ sɛ ɔsan tɔ nkyem du mu baako no a, ɛnde ontua ne bo no na ɔmfa ɛbo no nkyem anum mu baako nsan nka ho. 32 Nantwi oo, oguan oo, biribiara a ɛfa oguanhwɛfo poma ase no, nea ɛto so du biara bɛyɛ ade kronkron ama Yehowa. 33 Ɛnsɛ sɛ ɔhwɛ sɛ eye anaa enye, na ɛnsɛ sɛ ɔde aboa foforo sesa. Ɛba sɛ ɔde aboa foforo sesa a, ɛnde ɛno ne nea ɔde sesae no nyinaa bɛyɛ nneɛma kronkron.+ Ɔrentumi nsan ntɔ bio.’” 34 Eyinom ne ahyɛde a Yehowa de maa Mose sɛ ɔmfa mma Israelfo wɔ Sinai Bepɔw so.+
^ Anaa “obetua ɔkra bi.”
^ Homar baako yɛ lita 220 (bɛyɛ olonka 73). Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “wɔnsɛe no mma.”
^ Anaa “wotu obi si hɔ.”